अर्को तह सुरक्षा नेट: कैफे वेल्स्चेमर (पैटर्न धोखाधड़ी) को माध्यम ले पैट्रिक सावभा साजिश कोर्स
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	9 मई 2019 मा	•7टिप्पणिहरु
क्याफे वेल्स्चेम्बरजले भर्खरै एक "सागर" एरिक वेन डे बेक (एक सूटमा, एक गंभीर घडी र पोकर अनुहारको साथ) साजिशमा एक कथित पुरानो तारासँग पेट्रिक सावेलद्वारा एक साक्षात्कार प्रकाशित गर्यो। तपाईं तल साक्षात्कार पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ यो लिङ्क। साधारणतया साइटमा यहाँ छलफल गरिएको सबै कुरा शक्तिका यी पंजाहरूद्वारा पकडिएको छ (निस्सन्देह जुन "पेशेवर" हो र यसलाई तपाईंको लागि नक्शा बनाउनुहोस्)। यसको अतिरिक्त, प्रभाव यो सिर्जना गरिएको छ कि यो पैट्रिक सावेल साल को लागि दौड रहेको छ र पनि एक पुरस्कार जीता छ। वास्तवमा, छाप सम्भव हुनु पर्छ कि जब तपाइँ यो सबै "राम्रो" र "राम्रो" गर्नुहुन्छ भने नेदरल्यान्ड्समा साजिश सोच गर्न सक्दछ र मात्र सक्छ र मार्टिन व्रिजल्याण्डले यस्तो आक्रमण गरिरहेको छ राज्य कर्मचारीहरूसबै बकवास।
एक "पेशेवर" को रूपमा तपाईं आफ्नो पूर्ण-समय कार्य गर्न सक्नुहुनेछ र साजिश अनुसन्धान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यसको लागि सब्सिडी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वा यसको साथ पुरस्कार जित्न सक्नुहुन्छ। कुनै समस्या छैन। तपाईंको पूर्णकालिक नौकरी को अतिरिक्त, तपाईं धेरै मोटो लेख पनि लेख सकते हो। तपाईं यसलाई हिलाउन यदि तपाईं एक "सफ्टवेयर विशेषज्ञ" हुनुहुन्छ र (निश्चित रूप देखि जीआईएस, खाँटी संग केहि गर्न छैन)। "केवल यहाँ र त्यहाँ त्यहाँ एक मुख्य सम्पादक जसले सेवाका लागि काम गर्दछ, तर हामी खोजी अनुसन्धान पत्रकारहरू विश्वसनीय छन् र तपाईं हामीलाई कैफे वेल्स्चेम्बरजमा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ"।
त्यतिन्जेल तपाईं साजिशको सन्दर्भमा विचार गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। त्यो छाप हो जुन छाप हो। यो सबै सुन्दर छ र सायद केही हास्यास्पद छ। तर, यो मुख्यतया यसको अर्थ हो कि तपाईले स्वाभाविक रूपमा वास्तविक नि: शुल्क लेखकबाट हटाउनुभएको छ जसले आफ्नो गर्दन बाहिर निकालेको छ जुन नीदरल्याण्डमा दुर्व्यवहारको सट्टा 911 र अन्य 'मेरो बेड शो बाट "। तपाईं सुरक्षा नेट को तिर स्वच्छ रहनु हुनेछ hersengarage.nl नेतृत्व बस पार्क गर्नुहोस्, ताकि तपाईं भित्र हुनुहुन्छ।
हो, महिलाहरु र सज्जनहरू, यो राम्ररी बुझ्नैपर्छ कि गोपनीय सेवाहरू र उनीहरूका ठूला डेटा विश्लेषणहरू सजिलै संग सबै विषयहरू जो कि साजिशहरूको बारेमा इन्टरनेटमा फैलिएको छ नक्सालाई नक्शा गर्न सक्षम छन्। वास्तवमा, धेरैले तिनीहरूलाई आफैलाई सुरु गरेका छन् (निर्मित निर्मित desinfo डबल तल)। त्यसपछि तपाइँ एक प्रवक्ता जस्तै पैट्रिक सावेलसँग जोड्नुहुन्छ, जसले आउँदो र स्मार्ट सुन्दर केटालाई बाहिर लैजान सक्छ (क्या सब्सिडी बर्तन यसको पछि छ) कैफे वेल्स्चेमजज र तपाइँ सबैलाई तपाइँको सुरक्षा नेटमा फिर्ता लिनुभएको छ। यो कसरी एलेक्स जोन्स र जो रोगन संग अमेरिका मा भयो र यो कसरी नीदरल्याण्ड मा छ।
तपाईलाई धोकाको सबै ढाँचाहरू भनिएको छ, बाहेक अन्य वैकल्पिक मीडियाले शक्तिको जेबमा र मनोवैज्ञानिक संचालन (PsyOps) को बावजूद हॉलीवुड प्रविधिको द्वारा धेरै समाचारहरू सँगसँगै राखेका छन्। तपाईं झूटा झण्डाहरूमा विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, तर माथि सबभन्दा गहिरो नकली विधिको दिशामा धेरै बढ्न सक्दैन। शब्द गहिरो नकली यसैले पैट्रिकको कागजातमा देखा पर्दैन। PsyOp, or psy-op शब्द, केवल एक पटक आउछ, Q-Anon को सम्बन्धमा, तर पैट्रिक यसलाई स्पष्ट रूपमा पढ्न सक्षम छ साइटमा कि यो एक चारा बक्सको रूपमा लेबल गर्नुपर्छ। उनी उल्लेख गर्दैनन् कि पैट्रिक आफैले चरा बक्सको रूपमा काम गर्दछ। (हेर्नुहोस् र भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
तपाईंले पैट्रिक सावेललाई सुन्नु हुनेछ भनेर कसरी बताउनुभएको छ कि कसरी हत्याका कारण यो घटनालाई सुरू गरिएको छ समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान खेल खेल्नु र नयाँ कानुनद्वारा धक्का दिनुहोस्। अवर्गीकृत गर्दछ र गर्दछ। यदि तपाइँ क्याफे वेल्स्चेम्बरजमा हेर्नुहुन्छ भने, यो सबै अपेक्षा भन्दा राम्रो देखिन्छ। "निस्सन्देह त्यहाँ छलको ढाँचाहरू छन्, तर हामीले तपाईंको लागि यी म्याप आउट गरेका छौ। हामी, पेशेवरहरू, तपाईंको लागि माथि बस्छौं। यो सबै सही हुनेछ। अर्को कप कफीमा हाल्नुहोस् र फिर्ता बस्नुहोस् र आराम गर्नुहोस्। तपाईं काम गर्न को लागि स्मार्ट केटाहरु लाई छोड सकते हो।"र मार्टिन व्रिजल्याण्ड प्रकाशित प्रत्येक लेख संग, एक नयाँ सुरक्षा नेट फेरि सेट अप गर्न सकिन्छ। यो आश्चर्यचकित छैन कि पैट्रिकले चाँडै गहिरो फ्याक्स र पीएसओपी (मनोवैज्ञानिक अपरेशन) बारेमा केहि प्रकाशित गर्नेछ। प्रत्येक विषयको लागि सुरक्षा नेट।
तपाईंले सबभन्दा माथिको धारणा चाहिन्छ कि तपाइँ नेदरल्यान्ड्समा सजिलै बोल्न सक्नुहुन्छ र तपाईं साजिशहरूको अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। सबै पछि, तपाईं खुल्ला रूपमा पाठ्यक्रम प्रस्तावित गरिनेछ। तपाईं एक सुन्दर नि: शुल्क देशमा हामी के बाँच्न सक्नुहुन्न! हामी एनी फेबर को मामला को बारे मा कुरा नहीं जा रहे हो, हामी यहां वेबसाइट मा सबूत को बारे मा कुरा नहीं जा रहे हो, जो दिखाता छ कि कसरि Powned दृश्य मा प्रदर्शन गर्दछ। मैले तपाईंलाई कसरी देखाउँछु, उदाहरणका लागि, ज्यान्से भलगर्सेल पूर्णतया नियन्त्रण अन्तर्गत समयावधि र सबै काम गरिएको थियो। हामी धेरै अन्य PsyOps को बारे मा कुरा गरिरहेको छैन। यही कारण तपाईं यस साइटबाट टाढा जानुपर्छ र एक सुरक्षा जालका लागि निर्देशित हुनुपर्छ।
यो केहि छैन कि यो पैट्रिक एलेक्स जोन्स र जुन रोगनको बारेमा धेरै सकारात्मक छ। यो यी सज्जनहरू हुन् जुन शक्तिका पाहुनाहरू हुन्। सुरक्षा नेट पिन, जस्तै पैट्रिक सावेलले आफूलाई। पढ्नुहोस् यो लेख फेरि जाँच गर्नुहोस् र विशेष गरी यस लेखको तल्लोमा वृत्तचित्र हेर्नुहोस्, जुन म सुविधाको खातिर फेरि यहाँ हुनेछु।
धोकाको सबैभन्दा ठूलो ढाँचा भनेको सत्यसँग प्रहार गर्ने कुरा हो, शक्तिको पंजाबहरूले तपाईंलाई तपाईंको सुरक्षा जालहरूमा मार्गदर्शन गर्न, तपाईंले धोकाको सबै प्रकारका माध्यमबाट हेर्ने छाप दिनुभएको छ, तर मात्र त्यो चीजहरू बदलिँदैछ जुन तपाईंले देख्नै पर्छ: सुरक्षा नेट रणनीति.
स्रोत लिङ्क सूची: hersengarage.nl
नकली आलोचना अर्नोल्ड करस्कन्स र उनको नकली 'Zwartboek एनओएस समाचार': के एक farce!
ट्याग: एलेक्स, छल, बेक, कफी, साजिश सोच, साजिश, पाठ्यक्रम, de, एरिक, विशेष, मस्तिष्क गेराज, साक्षात्कार, जो, जोन्स, पैट्रिक, ढाँचाहरू, Rogan, Savalle, वैन, वेबसाइट, Weltschmerz
9 मई 2019 मा 14: 38
शेट ईर मार्टिन म तपाईंलाई अक्सर प्रतिक्रिया नगर्ने भए तापनि तपाईं पछ्याउन जारी राख्नेछु। म यस प्रकारका विषयहरूमा एल्बम / मिक्सटेपमा काम गर्दै छु, विशेष गरी समस्या, प्रतिक्रिया समाधान म अंग्रेजी र डचमा ठेगाना लगाउने प्रयास गर्दछु।
अझै पनि3महिनाको बारेमा आधा बाटो मार्फत लिन्छ, मलाई थाहा दिनुहोस् .. अब तपाईंको प्रयासको लागि धन्यवाद!
9 मई 2019 मा 15: 23
आह कति राम्रो छ,
त्यसोभए तपाईं पहिले नै मलाई एक गीतको लागि कोरस लिन सक्नुहुनेछ
यसका लागी यसले मलाई मेरो अनमोल समयको2घण्टा मात्र खर्च गर्दछ (किनभने म सानो ड्रम, गिटार र बास खेल्न चाहन्छु), तर म अझै पनि यो सम्पूर्ण गीतको रूपमा केहि अतिरिक्त गर्न को लागी सम्पूर्ण गीत बनाउन चाहन्छु। लेख्नुहोस्।
9 मई 2019 मा 20: 27
तलको लिंक। फेरि मिडियामा फर्केर धेरै अचम्मको दोष, परीक्षा बिना, वकील वा केही पनि प्रमाणको प्रमाण, त्यो वर्षा हुँदैछ, अब जगेडा छैन।
तपाईं पेट्रिक सावेल पढ्नुहुन्छ, निस्सन्देह तपाईले पढ्नु भयो किनभने तपाईं मार्टिनभ्रिजल्याण्डमा रहेका सामानहरु को वेल्ट्सचेमर्ट्ज 1 /3मा साक्षात्कार पढ्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसपछि यहाँ केहि अन्य।
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहेकी थिईन। उनीहरुका अनुसार उनीहरुका साथीहरुसँग भेटघाट गरेकी थिइन। यसको साथ
10 मई 2019 मा 18: 20
बेशक गुण 'weltschmerrz' एजेन्टहरूबाट हो
हामी शासनबाट हामी कम्तिमा म छुटकारा पाउन चाहन्छौ। तिनीहरूको पृष्ठभूमि पत्ता लगाउनुहोस् र सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय टेम्प्लेटहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तिनीहरूका स्क्रिप्ट केटाहरूको रूपमा निश्चित छ।
म पैट्रिक सावेल सुन्छु, के सम्भवतः उनी इङ्गल्याण्डमा बाल दुर्व्यवहार सेलिलसित सम्बन्धित छन्? यो मलाई आश्चर्य नगर्ने, तिनीहरू लगभग सबै एक-अर्कालाई चिन्ता गर्छन्, प्रायजसो त्यस्ता पृष्ठभूमि परिचित हुन्छन्। पितिकले उनीहरूलाई 'जर्मन' बोल्नु भनेको जर्मनीमा बस्नेहरू जस्तै जस्तै 'फ्रान्सेली' पृष्ठभूमि हो।
13 मई 2019 मा 08: 54
हे मार्टिन, मैले तपाइँको टुक्रालाई बचाएको छु। यो ठाउँ दिनेछु।
हिजो हामीले2गीतहरू बनायौँ र तिनीहरूलाई दिनको लागि अन्त्य गर्यौं, केहि छिटो जान्छ तर चाँडै सकेसम्म समाप्त गर्न प्रयास गर्नेछ।
त्यसो भए उनीहरु एकैछिनमा रमाईलो लाग्न थालिन्। उनीहरु एकैछिनमा रमाईलो लागेकी थिईन। उनीहरु एक अर्काको साथमा थिए।
13 मई 2019 मा 13: 01
निस्सन्देह तपाईसँग केहि गर्न चाहानुहुन्छ, म साँच्चै बरु आफैले नै गर्छु
13 मई 2019 मा 14: 15
पूर्ण रूपमा हुनेछ यो प्रयोग गर्नुहुन्न।
« मार्टिन भिजल्याण्डले नियन्त्रणमा लिएको छ? होइन: यहाँ पढ्नुहोस् किन यो कुरा होइन!
अवलोकन हिरासतका लागि थियम्स एच, एडिथ शिपरको बिल पछि, अघिल्लो सरकारमा खारेज गरिएको छ, सबैलाई स्वीकार गरिनेछ। »
कुल भ्रमण: 12.337.166